ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “အရုဏ်ဦးကြောင့် ရူးတော့မည်”
နအဖ ရဲ.လက်ဝေ ခံ မဟုတ်လို. အနုပညာ နဲ.လုပ်မစားရလဲ ငတ်မသေပါဘူး။
ကိုကျော်သူတို. ကိုဇာဂနာတို. ကို အတုယူ သင်.ပါတယ်။
ပြည်သူများ ကလည်း နှစ်ဖက်ခွ ထိုင်တဲ. အနုပညာ ရှင်များ ကြံ.ဖွတ်များကို ပြတ်ပြတ်သားသား ပယ်ကြပါ။ကျင်ကြ ပါ။ ဒေါက်တိုင်များကို
လုံးဝ အားပေး အားမြှောက် မလုပ်ကြရင် နအဖ ဘယ်လောက်ခံ နိုင်မလဲ။
If these Myanmar celebrities do favourable to Military regime for making country strong and unite,what is the difference then Suu Kyi and so called exiled politicians doing NONSENSE in favour of some foreign institutions to make Myanmar and its citizen complicated???
People who loyal to their country are always GRACIOUS.
တကယ် စဉ်းစားသင့်တဲ့ ပြောင်မြောက်တဲ့ ဝေဖန်ချက်တွေပါပဲ ကိုပေါရေ… လှတယ်ဗျို့..
ခုအဖြစ်ကို ကြည့်ရင်း ကျွန်တော်မြင်တာတော့ ဒီကနေ ပြည်ပနိုင်ငံရေးသမားတွေအတွက် အရှုံးရလဒ်တွေ ထွက်လှပါတယ်ဗျာ...
- သူတို့ လုပ်စရာလမ်းကြောင်း ပျောက်ပီး ရရဆွဲနေရပီဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးသိက္ခာကို မြင်ရတယ်ဗျာ..
- အင်အားစုတွေထဲမှာ ဒါကို အမြင်တူသူ မတူသူဆိုတဲ့ သဘောကွဲ အငြင်းပွားချက်တွေကို အရေးကြီးတာလဲ မဟုတ်ပဲ ဘာမှ ထိရောက်မှုလဲ မရှိတဲ့ ဒီဆန္ဒပြမှုတွေလောက်နဲ့ အဖြစ်ခံနေရပီဗျာ..
- သတင်းတွေမှာ ဒါတွေကြီးစိုးလာတာမို့ တကယ့်နိုင်ငံရေးအရ ထိရောက်မဲ့ သတင်းတွေ လှုံ့ဆော်ချက်တွေထက် ပိုစိတ်ဝင်စား ခံနေရတယ်ဗျာ… အစိုးရကိုယ်စား အာရုံလွှဲပေးတယ် ထင်ပါရဲ့..
- ပြည်သူချစ်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေကို တိုက်ခိုက်တာမို့ သူတို့နောက်က ပြည်သူအင်အား (လုံးဝလျော့တွက်လို့ မရတဲ့ အင်အားပါ)နဲ့ ပြည်ပ အတိုက်အခံဆိုတာ တသားထဲဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေ ပြည်သူဆီက အနဲနဲ့အများ လျော့ပါးသွားသလို အနုပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်လဲ အစိုးရကို မကြိုက်ရင်တောင် ပြည်ပက အစိုးရကို ဆန့်ကျင်နေသူတွေဟာ သူတို့ထင်ထားသလိုကြီး မဟုတ်ပါလားဟ ဆိုတဲ့ စိတ်တွေ ၀င်လာမယ်ဗျာ.. (ပုံမှန် နိုင်ငံရေး အကြောင်း အတင်းတုတ်ရင် အစိုးရမကောင်းကြောင်းပဲ ပြောလေ့ရှိသမားတွေအတွက် ပြောစရာ တိုးသပေါ့ဗျာ)
အဲ.. ရလာဒ်ကရော အဲလိုအရှုံးတွေနဲ့ တန်ကောတန်ရဲ့လားဆိုတော့.. ပေါ်လစီထပ်ရိုက်ဖို့ အနုပညာသမားတွေ တွန့်သွားမှာ မှန်ပေမဲ့လဲ ပြည်တွင်းက သန်းနဲ့ချီတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးလဲ ထောက်ခံနေတဲ့အချိန်.. ပြည်ပက လက်ဆယ်ချောင်းတောင် အနိုင်နိုင်ဖြည့်နေရတဲ့ ဆန္ဒပြသမားတွေ ကြောက်လို့ အစိုးရဖိအားကို ဆန့်ကျင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ အဖြစ်မျိုး ပေါ်လာမယ်လို့.. အင်း.. မပြောရက်လို့ မပြောပါရစေနဲ့တော့လေ.. ဆန္ဒပြသူတွေခမျာ သနားပါတယ်.. ဟီးဟီး…
သတင်းတော့ ပေးချင်ပါရဲ့… ခုကော်မန့်ရေးတဲ့ ညမှာ ဆန္ဒပြခံရတဲ့ ကားအပိုင်းနှစ်လာမယ်ဟ ဆိုပီး သာမာန်ထက် စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်ကြမဲ့သူတွေ များနေတာမို့ ကြော်ငြာအခမဲ့ ပြုလုပ်ပေးသူတွေကို အစိုးရက ကျေးဇူးတင်နေမယ် ထင်ပါရဲ့ဗျာ…
ပြည်ပရောက် များက ပြတ်ပြတ်သားသား တုန်.ပြန်တာကို ပြည်တွင်း က အားရမိပါတယ်
၂ဖက်ခွတွေ နောင်ကျဉ်အောင် ပြည်တွင်းက
သူတို.ကို လုံးဝ အားမပေးဘို. စတင်နေပါပြီ
အတု အရောင်ရွေးကေါက်ပွဲ ကိုလည်း မဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေကြသလို
မလွှဲ မရှောင်သာ ဖြစ်ခဲ.ရင်လည်း ကြံ.ဖွတ် နဲ.တစည
နဲ. သူတို.အပေါင်းပါများကို မဲလုံးဝ မပေးကြဘူးဆို
သူတို့ Income tax တွေဆိုလို့ရှိရင် ရာခိုင်နှုန်း ၅ဝ လျှော့ပေးထားတာပဲ။ အဲဒီကြားထဲက များတယ်ထင်ရင် ထပ်တင်- တင်သလောက်ကို လျှော့ပေးထားတာပဲ။ အဲသလိုမျိုးပေါ့ သူတို့လိုချင်သလောက်ကို လုပ်ပေးထားတာ ရှိတာပေါ့။ ဒါက ပြန်ကြားရေးနဲ့ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးနဲ့ ညှိပြီးတော့ သူတို့ကို ခေါ်တာ။ ခေါ်ပြီးတော့ သူတို့ကို ပေးတာတွေတော့ ရှိတယ်။ နောက်ညစာစားပွဲ ဖိတ်ပြီးတော့ ဆုချီးမြှင့်တာတွေလည်း ရှိတယ်။
That is what the Director Tin Than Oo said. That is one of the reasons behind for acting in this video
ကိုပေါ ရေ မည်သူတစ်ဦးတယောက် အဖွဲ့အစည်းတရပ် ကိုဖြစ်စေ မိမိရင်ထဲက မကျေနပ်မှု ရှိလျှင် ထိုသူကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြသခွင့်မရှိဘူးလား ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာ စော်ကားမော်ကားပြောဆိုတာ မဟုတ်သလို မကျေနပ်ချက်ကြောင့် ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက်တာလဲ မဟုတ်ပါဘူး မင်းသား မင်းသမီးများလည်း ဖိအားကြောင့်ဖြစ်စေ တခြားအခွင့်အရေး များရရှိလို့ဖြစ်စေ မိမိနှစ်သက်ရာ လုပ်ခွင့် ရှိသလို မကျေနပ်သူများလဲ ဆန္ဒပြသခွင့်ရှိပါတယ် ဒါဟာနှစ်ဘက်လုံးမှာ ရှိတဲ့ အခွင့်အရေးဘဲ
kyawhtin..... ငြိမ်းချမ်းစွာ ထုတ်ဖော်ဆန္ဒပြလို့ရပါတယ်။ ကျနော်လည်း ဆန္ဒပြလို့ရပါတယ်လို့ ပို့စ်မှာ အတိအလင်း ထည့်သွင်းရေးသားထားပါတယ်။ အခုကိစ္စအတွက် “ဆန္ဒပြသင့်မပြသင့်” ဆိုတာထက် “ဘယ်သူတွေကို ဆန္ဒပြမှာလဲ” နဲ့ “ဘယ်သူတွေက ဆန္ဒပြသင့်သလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မေးထားတာပါ။ ဒီမေးခွန်းကို ဘာကြောင့်မေးရသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းကိုပါ ပို့စ်ထဲမှာ အသေအချာ ရေးပြထားပါတယ်။ သေချာတာက ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့လုပ်ရပ်အတွက်လည်း ကျနော်တို့မှာ မေးခွန်းထုတ်ပိုင်ခွင့် ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်လို့ မြင်မိတဲ့အလျောက် ရေးသားဝေဖန်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
To all the Burmese activists who live outside Burma and protest celebrities who participate in Arr Yone Oo movie,
You Guys are comparing celebrities with Kyaw Thu and Zar Ga Nar.
What if we compare all the politicians who live outside Burma with Min Ko Naing, Ko Ko Gyi and other politicians who live inside Burma.
Keep your words for Kyaw Thu and Zar Ga Nar who are staying inside Burma and really fighting for Burmese people.
What are you guys doing when Min Ko Naing, Ko Ko Gyi and other 88 generations students fighting for Burmese people??? What are you guys doing when monks fighting for Burmese people???? Are you guys thinking of going back to Burma and protest together with them???? Or at least are you guys thinking of going to border area and participate in political movements there??????
You guys just gave so many reasons to stay here (not only you, brought family also) and just shout when no one arrest you.
၀ိုင်းစုခိုင်သိမ်းကို ဆန္ဒပြတာ မကောင်းဘူးဆိုပြီး အော်ငေါက်နေတဲ့ . . . သူရဲကောင်းလိုလို.. ဆရာကြီးလိုလို ပြောနေတဲ့သူတွေကို မေးလိုပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ရင် အမှားဆိုတာရှိမှာပဲ . . . . . ဘာမှ မလုပ်ရင် ဘာမှ အပြစ်တင်ခံရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကျုပ်ကလဲ အော်ငေါက်နေတဲ့သူတွေနဲ့ ဆုံးမသြ၀ါဒပေးနေတဲ့သူတွေကို တစ်ခုလောက်မေးလိုပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့က တိုင်းပြည်အတွက် ဘာများလုပ်ပေးနေသလဲ? ဘာမှ မလုပ်ပဲ ဘေးကနေ ရပ်ကြည့်ပြီး အော်ငေါက်နေတာလား?
If you are considered yourself asapolitician and mention yourself as political activist,you will get criticize by ordinary people in whatever way.
If you cannot take all these things, don't mention yourself asapolitical activist or any others
And the most important thing, don't ask ordinary people " what you have done? ".
There's nothing wrong with ordinary people if they did nothing.As they are not consider and mention them self as politicians.
But it's really shameful when people mention them self asapolitician and doing nothing at all or doing stupid brainless things like this.
No one complain about this protest activity if they protest against Burmese government and their policies. And everybody will support them.
But they are attacking all these celebrities personally and want to cancel their concert.
The worst thing, they are attacking not only celebrities but also people who are watching this concert. And also mentioned Zar Ga Nar's children watching this concert.It's show how childish they are.
All these innocent people went there and watch just concert.They were not there to watch " Arr Yone Oo", they were not there to support the military government.
Let's see what is the outcomes of this protest: celebrities keep on doing their jobs,nothing happen to government and finally the great lost is people look down on these protesters.
Let me conclude my comments with U Pho Thar Aung's comment
" the military government still controlling our country not because of the celebrities acting in policy movies but because of the politicians (outside Burma) doing useless stupid things.
(And the most important thing, don't ask ordinary people " what you have done? ")
ခင်ဗျားဟာ နိုင်ငံရေးသမား မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာ အတွေးအခေါ်ရှိတယ်။ စဉ်းစားဥာဏ်ရှိတယ်။ အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စကို ဦးစားပေးတတ်တယ်။ ခင်ဗျားမှာ စဉ်းစားဥာဏ်နဲ့ အတွေးအခေါ် လုံးဝမရှိဘူး။ ကျုပ်တို့ နိုင်ငံဟာ ဆူးညှောင့် ခလုတ်တွေထူတဲ့ လမ်းကြမ်းပေါ်မှာ လျှောက်နေရတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာအများစုဟာ တိုင်းပြည်အရေးကို ဘေးကနေ လက်ပိုက်ပြီး မတ်တပ်ရပ်ကြည့်နေကြတယ်။ ကျုပ်လဲ ၀ိုင်းစုခိုင်သိမ်းကို ဆန္ဒပြတာကို မှားတယ်လို့ ယူဆတယ်။ မတရားဘူးလို့လဲမြင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲလိုလုပ်ခံရလို့ ၀ိုင်းစုခိုင်သိမ်း ဘ၀ပျက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ ဘာမှ မဟုတ်တာလေးကို အဲလောက် အဖြစ်သည်းနေကြရင် ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း ပုရွက်ဆိတ်ကိုက်ခံရရင်.. ခင်ဗျားတို့တွေ ကမ္ဘာပျက်လုမတတ် အော်မယ်ထင်တယ်။
အခုအချိန်မှာ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဆိုတာ လုံးဝ မရှိသလောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ အဲဒီလက်တစ်စုတ်စာ လူနည်းစုက လုပ်နေလို့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုလေးက အသက်ငွေ့ငွေ့လေးကျန်နေတာ။ အဲဒါကို မဆင်မခြင်နဲ့ ခင်ဗျားတို့က ဆရာကြီးလိုလို.. ဘာလိုလိုနဲ့ သြ၀ါဒပေးနေရင်.. ဒီလူတွေက စိတ်ပျက်ပြီးမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင် ဘာဖြစ်သွားမလဲ? နှစ်၂၀ကျော်… အသက်တွေ.. အချိန်တွေ စတေးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးဟာ သဲထဲရေသွန်သလိုဖြစ်သွားမယ်။ ခင်ဗျားအဲဒါတွေးမိလား? စဉ်းစားဥာဏ်ရှိရင် တကယ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကို ကိုယ်တိုင်က ဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ သြ၀ါဒပေးမနေနဲ့။
ဆရာသိပ်လုပ်ချင်သပါ့ဆိုရင် တိုင်းပြည်အရေးကို ဘာမှမလုပ်ပဲ ဘေးကနေ လက်ပိုက်ကြည့်နေသူတွေကို အပြစ်တင်စမ်းပါ။ အခုဟာ ဘာမှမလုပ်တဲ့သူတွေကို ပြည်သူတွေဆိုတဲ့ တံဆိပ်ကိုတပ်ပေးပြီး ဦးထိပ်ထားနေကြတယ်။ ဘာပြည်သူလဲ? တာဝန်မသိတဲ့သူက ပြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်.. ဘာအကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ် . . . ဂရုစိုက်ဖို့မလိုဘူး။ တာဝန်သိပြီး လက်တွေ့လုပ်နေတဲ့သူတွေကိုသာ ငဲ့ညှာစဉ်းစားရမှာ။ ရှင်းသလား?
တိုင်းပြည်အရေးကို လက်တွေ့လုပ်နေသူများကို ကာကွယ်ပေးနေသည့်
"အင်း.... ဆန္ဒပြ ကြတယ် ။ လူလေးငါးဆယ် ယောက်ဲရှိတယ် ။ အခု မြောက်ကာရိုလိုင်းနား မှာ တော့ ဒီမိုကရေစီ လုပ်တဲ့ အကိုကြီး တစ်ယောက် အိမ်မှာ တည်းတယ်။ ၀ါရှင် တန်မှာ တုန်းက လည်း သတင်းဌာန က အမကြီး တစ်ဦးက ဒင်နာပေး လို့ တစ်ည လုံးကဲ တယ်။ နယူး ယောက် က သံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြတဲ့ အတိုက်အခံ အမ ကြီးကလည်း ကျွန်တော့်ပေါင် ပေါ်မှာ မူးမူး နဲ့ တက်ထိုင်တာ မဆင်းတော့ ဘူး" ထိုခရီးစဉ် တွင် ပါဝင် သည့် အဆိုတော် တစ်ဦးက Freedom News Group သို့ ပြော သည်။
မင်းကယောကျားမဟုတ်လားကွာ။ အတင်းအဖျင်းပဲပြောတတ်တယ်။ အဲဒီအစ်မကြီးက ပေါင်ပေါ်တက်ထိုင်တာက သူ့ကိစ္စပါ။ အဲဒါနဲ့ နအဖကို မဖြုတ်ရတော့ဘူးလား?
မင်း အားရှိမင်းပထွေး စစ်ခွေးတွေ ပြေးပြေးမြင်နေ တတနေ။ နအဖ ကိုတိုက်တိုင်း လုပ်ချင်တာလုပ် လို့ရတယ် မင်းတို့ကို ဘယ်ပထွေး သင်ပေးထားလဲ။ သောက်ကျင့်က စစ်ခွေးတွေ နဲ့ အတူတူပဲ။
ထွီ.... ဒါနဲ့များ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက်ဒဲ့ကွာ မင်းတို့DEMOCRACYလုပ်စားသမားတွေ
ဟဲဟဲ.. ငါ့ကိုငါ.. အထင်ကြီးတာ အပြစ်မတင်နဲ့လေကွာ။ မွတ်ဆလင်ကို အမြစ်ဖြုတ်မယ်လို့ ပါးစပ်လေးနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ ကုလားကိုဂျူး သူက ကုလားမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီး ဖင်ပိတ်ငြင်းတယ်။ အခုဆိုရင် မွတ်ဆလင်ဆိုတာ ဆီပုံးမှာရှာလို့မတွေ့တော့ဘူး။ နအဖကို မထောက်ခံတော့ဘူးလို့ ပါးစပ်နဲ့ပြောလိုက်တော့ psywar စစ်ဗိုလ်တွေကို ရှာလို့ မတွေ့တော့ဘူး။ အညာသား ဘ၀င်မြင့်တာ…. မြင့်ထိုက်လို့ မြင့်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပါ။ ဟဲဟဲ။ မေးစရာလေးရှိသေးတယ်။ ဘာအတွက် ဒီမိုလုပ်စားတွေကို မုန်းနေတာလဲ? ဒီမိုလုပ်စားတွေက နအဖလို တိုင်းပြည်က ငွေကိုလိမ်တာမှ မဟုတ်တာ။ ဒီမိုလုပ်စားတွေ နအဖလို တိုင်းပြည် သံယံဇာတတွေကို ထုတ်ရောင်းပြီး လုပ်နေတာမှ မဟုတ်တာ။ နအဖလို စစ်သားက စစ်သားလိုမနေပဲ တိုင်းပြည်အဏာသိမ်းထားတာ မျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အဖြူတွေဆီက ငွေကို လိမ်တောင်းတယ်လေကွာ။ ဒီမိုလုပ်စားတွေရဲ့အလုပ်က ကုသိုလ်လည်းရ ၀မ်းလည်းဝ အလုပ်ပဲ။ အဖြူတွေ ပိုက်ပိုက်ကို ရအောင်လုပ်တာ.. မင်းကဘာလို့ နာနေတာလဲ? အဖြူက မင်းပထွေးလားကွယ်? ၀ါးဟားဟား
မင်းပြောရင်း ပြောရင်းနဲ့ စောက်ရမ်းကြောင်တောင်တောင်နိုင်လာပါလား
မင်း ကုလားတွေ စစ်ဗိုလ်တွေ နဲ့ ဖင်ပိတ် ဆီပုံးပျောက် အညာသွားတဲ့ အကြောင်း မင်းကိုယ့်ဟာကိုပဲ စိတ်ထဲထားပီး တွေးတွေးပျော်။ ဘယ်သူမှ ဝင်ပြီး ပြောချင်မှာမဟုတ်ဘူး
ဒါပေမဲ့ မင်းတို့ DEMOCRACYလုပ်စားသမားတွေရဲ့ စောက်ကျင့် စောက်တန်းစား တွေကိုတော့ ပြောရမယ်။ နအဖ စောက်သုံးမကျတာကို ဗဲန်းပြပြီးတော့ နအဖ စောက်ကျင့်ကျင့်တော့တာပဲ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောတဲ့ ဖာနိုင်ငံ ဆိုတာ ဒါပဲ။
မင်းကြည့်ရတာ ငါပြောတဲ့ အတိုင်းပဲ DEMOCRACYလုပ်စားသမားတွေရဲ့ စုပေါင်းစပ်ပေါင်းသားလား ဒါမှမဟုတ် အဖြူတွေကို ငယ်ငယ်က ပထွေး ခေါ်ခဲ့ရလို့ အဲလောက်စိတ်နာနေရလား။ သေခြာတာ ကတော့ နအဖ နွား နဲ့ ဒီမို ခွေးသူတောင်းစား ကြားမျိုးစပ်ကျတဲ့ကောင်ပဲ စောက်ကျင့် ကြည့်ရတာ
ဟေ့ကောင်။ ငါပြောတာ လူစကားပါကွာ။ မင်းနားမလည်ဘူးဖြစ်နေတာ သိပ်ကို အံ့သြရပါလား။ ဒီမိုလုပ်စားတွေကို ဒေါသထွက်စရာမရှိဘူးဆိုတာ ငါပြောပြထားတယ်လေ။ အဖြူ ပိုက်ဆံသုံးတာ မင်းပထွေး ပိုက်ဆံသုံးတာမှ မဟုတ်တာ။ နာစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ နအဖနဲ့ နှိုင်းယှဉ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ လူလိုပြောနေတာ နားမလည်ဘူးလား?
မင်းလို နွားမကျ ခွေးမကျ ကြားကစပ်ကျပြီး ကောင် လူစကားစပြောပြီလား
မင်းရပ်ကွက်က ဝိုင်းကျွေးထားတဲ့ဘဝက တက်ပြီး လူအထင်ကြီးခံချင် လို့ကျိုးစားပန်းစား ကုန်းကုန်းအော်နေတာ ကိုယ်နားလည်တယ်။
ဒါပေမဲ့ မင်းရဲ့ ကုလားFantasyတွေ အဖြူobsessionတွေ မင်းသိသမျှ ထင်သမျှ ခံစားရသမျှတွေ စောက်ရမ်း နေရာတကာ ပြောပြောနေတာတော့လျှော့ကွ၊ မင်းကို မင်းသိတ်ဖြစ်ချင်နေတဲ့ လူတတ်ကြီးလို့ မထင်ပဲ ဦးဏောက်ထဲ သုက်ပိုးရောက်သွားတဲ့ စောက်ရူးလို့ထင်နေကြပြီ။
ညီလေးဇော်လဗွတ်မျိုး ဆင်ခြေပါကွာ... မင်းကို ဝိုင်းဝန်းမျိုးစပ်စောင့်ရှောက်ရှာကျွေးသင်ပြခဲ့တဲ့ မင်းအမေလင် နအဖ နဲ့ Democracyလုပ်စားသမား တွေမျက်နာထောက်ပြီး
မင်းပြောတော့ စစ်ဗိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့။ စစ်ဗိုလ်တွေကို ကလိထားတဲ့ မေးခွန်းလဲမြင်ရော.. မနေနိုင်တော့ဘူး။ ပုန်းရာကနေ ထွက်လာတယ်။ အားတောင်နာသွားတယ် :P ။ ကဲပါကွာ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်တာ ခဏထားပါဦး။ ဒီမိုလုပ်စားတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကြောင့် နအဖဟာ အနည်းနဲ့အများဆိုသလို လူအခွင့်အရေးကို ပိုပြီးလေးစားနေတယ်ဆိုတာ မင်းကိုယ်တိုင် အသိအမှတ်ပြုခဲ့တယ်။ ဒီမိုလုပ်စားတွေဟာ တိုင်းပြည်ငွေကို နအဖလို မလိမ်ဘူးဆိုတာကိုလဲ မင်းကိုယ်တိုင်လက်ခံတာပဲ။ ကဲ . . . အကျိုးအကြောင်းနဲ့ ဖြေစမ်းပါ။ နအဖ၊ တာဝန်မဲ့ပြည်သူ၊ ဒီမိုလုပ်စား၊ မွတ်ဆလင် . . စသဖြင့် မကောင်းတဲ့ လူတွေအများကြီးထဲမှာ ဘာလို့ ဒီမိုလုပ်စားတွေကို သဲကြီးမဲကြီးတိုက်ခိုက်နေတာလဲ? တိုင်းပြည်ငွေလဲ မလိမ်ဘူး.. တိုင်းပြည်ကိုလဲ အကျိုးပြုနေတယ်။ အကျိုးအကြောင်းလေးနဲ့ ပြောပြပါလားကွာ။
ဘာရေးထားလဲ သေသေချာချာဖတ်။ မင်းယားယားပီး ဆိတ်ဗိုလ်တွေနဲ့ ကလိထားတာ ငါစိတ်လဲမဝင်စားဘူး ဖြေလဲမဖြေထားဘူး။ ငါပြောသလိုပဲ မင်း သုက်ကြောင်ကြောင်ပြီး မင်းစိတ်စွဲရာ ကုလားတွေ ဆိတ်ဗိုလ်တွေ စိတ်ထဲမှာပဲ ထား။ ထုတ်ထုတ် မပြောနဲ့ မင်းအကြောင်း လူတွေသိကုန်ပြီ။
မင်းတို့ဒီမိုလုပ်စားလုပ်ရှားတွေ တိုင်းပြည်ငွေကို နအဖလို မလိမ်ရင်ပဲရပြီလား ပိုကောင်းသွားပြီလား။ နအဖ တိုင်းပြည်ကို နွားကျနေတာကို ဗဲန်းပြ နိုင်ငံတကာမှာ အခွင့်အရေးယူ ကိုယ်ကျိုးအတွက်သုံးပြီး ခွေးကြံကြံနေတာ တိုင်းပြည်ကိုအကျိုးပြုနေတယ်လား အနှစ်၂၀လုံးလုံး။ ဒီစောက်ကျင့် စောက်တန်းစားနဲ့ DEMOCRACY ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပါလား။ မင်းတို့ လက်ထဲအာဏာရောက်ရင် နအဖ နည်းတူ တိုင်းပြည်ပျက်မှာပဲ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောတဲ့ ဖာနိုင်ငံ ဆိုတာ ဒါပဲ ဒီစောက်ကျင့်တွေနဲ့။
မင်းကြည့်ရတာ ညီလေးဇော်လဗွတ်မျိုး... မင်းအမေလင် နအဖက စွန့်ပြစ်လိုက်လို့ ဒီမိုလုပ်စားသူတွေနဲ့ပေါင်းပြီး မင်းပထွေးအဖြူတွေဆီ ခွက်ပြတောင်းစားရိုက်စား နေပြီထင်တယ်။ ငါတော့ မင်းအမေပဲ သနားတယ်.. မင်းကဟိုလူ အဖေခေါ် ဒီလူအဖေခေါ်နဲ့
“နိုင်ငံတကာမှာ အခွင့်အရေးယူ ကိုယ်ကျိုးအတွက်သုံးပြီး ခွေးကြံကြံနေတာ တိုင်းပြည်ကို အကျိုးပြုနေတယ်လား အနှစ်၂၀လုံးလုံး။” သူတို့ကိုယ်ကျိုးအတွက် သုံးတဲ့ ငွေတွေက မြန်မာပြည်က ပိုက်ဆံတွေမှ မဟုတ်တာ။ အဖြူတွေက ကြည်ကြည်ဖြူဖြူနဲ့ ငွေတွေပေးကြတာပဲ။ အဲဒီအဖြူတွေဆီက ငွေကုန် လိမ်တောင်းလို့ ဒေါသထွက်တယ်လို့ပြောနေတာလား? သြော်.. တော်တော်ကို ခိုင်လုံတာပဲနော်။
တိုင်းပြည်ကို အကျိုးမပြုဘူးလို့ စောက်ရှက်မရှိ ဖင်ပိတ်မပြောနဲ့လေ။ အခုပဲခူးကိစ္စကို နအဖ သတင်းစာကနေ ရှင်းလင်းပြတာတွေ။ စစ်သားတွေကို လူလိုနေထိုင်ဖို့ တပ်တွင်းမှာ အမိန့်ထုတ်တာတွေက ဒီမိုလုပ်စားတွေလုပ်လို့ ရလာတဲ့ အသီးအပွင့်တွေပဲ။အဲဒါကို ဖင်ပိတ်ပြီး ဘာမှ အကျိုးမရှိဘူးလို့ မပြောနဲ့လေကွာ။ ဦးသန်းရွှေကြောင့် တပ်မတော်အရာရှိတွေ. . . ဖာသည်မလောက်တောင် သိက္ခာမရှိတော့ဘူး။ ဗြောင်လိမ်.. ဗြောင်စားနဲ့ကွာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မင်းတို့ ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေအားလုံး ဖာသည်မဆီမှာ ရှက်နည်းသင်တန်းတက်လိုက်ဦး။
ဖာသည်မလောက်မှ မဖြောင့်မတ်သည့် စစ်ဗိုလ်များကို တိုက်ခိုက်နေသည့်
Please block these two stupids "Zaw Myo" and "Ar" from your blog. Really irritating...
Hey, black dog "Zaw Myo" and white dog "Ar",.... go and bite at other places. Here is not place for you to bite each others...
ဟားဟား.. ဒါလား မြန်မာနိုင်ငံDEMOCRACYရဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုသူတွေရဲ့ စိတ်ဓတ်နဲ့အဆင့်အတန်း။ DEMOCRACY လို့ပါးစပ်ကတဖွဖွအော်ပြီး လိမ်ညာဂွင်ရှာ အချင်းချင်းကျော်ခွနေရာလု ပြီးတော့ ဘာတဲ့ နအဖလို နိုင်ငံပိုက်ဆံကို မသုံးရင်ပြီးတာပဲ တခြားငါတို့ဘယ်မှာလိမ်လိမ် ဘယ်လိုသုံးသုံး ဟုတ်လား ဟားဟားဟား..
မင်းသိလား ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောခဲ့တာ နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာ ရိုးသားရတယ် နိုင်ငံရေးကို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ကျိုးအတွက် အသုံးမချရဘူး ဆိုတာ။ မင်းတို့ကတော့ကွာ နအဖ နွားကျတာနဲ့ပဲ ဖက်ပြိုင်ကိုက်ပြီး ခွေးကျနေတာ အေးပြောရရင် နအဖနွားနဲ့ ထူးမခြားနားတဲ့ နောက်လိုက် ခွေးသူတောင်းစားတွေပဲ။ ဒါကြောင့်လဲ တိုင်းပြည်အနှစ်၂၀လုံးလုံးဒီလိုဖြစ်နေတာ။ အထဲမှာ တကယ် အနှစ်နာခံ ကိုယ်ကျိုးစွင့်ပြီး လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး သမားတွေ နဲ့ ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြည်သူတွေ ကိုပဲ သနားတယ်။
ဆိတ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ ဆိတ်ဗိုလ်တွေအားလုံး ရှက်နည်းသင်တန်းတက်ဖာသည်မဆီ မပို့တော့ဘူး.. မင်းဆီပို့မယ် မင်းကအတွေ့ကြုံပိုများတယ် ဟိုလူ အဖေခေါ် ဒီလူအဖေခေါ်နဲ့.. ညီလေးဇော်လဗွတ်မျိုး။
try to talk likeaman here or go getagrip you sassy boi!
We hate Na Ah Pha which has been doing bad things for Burma and people in there.
We have to respect politicians in Burma like Min Ko Naing, U Win Tin and Zarganar, and politicians who live in the other countries. However some of the politicians in the other countries get aid and have been protesting the Burmese government, and should not be respected.
So those people who are getting aids, do not understand how they should have done for Burma and are looking for political asylum will protest these Burmese celebrities who performed in "Aryongoo mar phu the kyar". No matter what they are slave in Burma. If they did not perform in the movie, the Na Ah Pha would have done something for them.
Some people said they should not have done it.
The people saying it would have gone and would have visited to Burma to do protesting like NLD has been doing for NO VOTE.
WE JUST NEED TO PROTEST THE BURMESE GOVERNMENT, NOT THE SLAVES.
ဘာသဘောနဲ့ “မြန်မာနိုင်ငံDEMOCRACYရဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုသူတွေရဲ့ စိတ်ဓတ်နဲ့အဆင့်အတန်း။” လို့ပြောနေတာလဲ? ဦးတည်ချက်ကို မပြောင်းနဲ့လေကွာ။ ငါတို့ဆွေးနွေးနေတာ ဒီမိုလုပ်စားတွေရဲ့ လုပ်ကိုင်ချက်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက် ရှိ..မရှိကို သုံးသပ်တာပဲ။ အကျင့်စာရိတ္တမွန်မြတ်လား.. နိမ့်ကျလားဆိုတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေကွာ။
☀ ဒီမိုလုပ်စားတွေ အဖြူငွေတွေသုံးတာ မြန်မာပြည်ကို မထိခိုက်ဘူး..
☀ သူတို့ကြောင့် နအဖ လူအခွင့်အရေး လေးစားလာအောင် လုပ်နိုင်တယ်လေ
မြန်မာပြည်ကို အကျိုးပြုနေတဲ့ ဒီမိုလုပ်စားတွေကို ဒေါသထွက်ဖို့မလိုဘူးလေ။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ မိမိနိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးအကျိုးက အဓိက မဟုတ်လား? ဟဲဟဲ။ အဖြူတွေနေရာကနေ အလကားနေရင်း နာမနေနဲ့လေ။ ပတ်ပြေးနေတာ မောလှပါတယ်ကွာ။
(p.s ကုလားတွေ.. ငါတို့မြန်မာတွေအကြား ၀င်မရှုပ်နဲ့။ အဲလောက်ပဲ ငါသတိပေးထားမယ်။ ငါတို့အိမ်မှာ ခိုကပ်နေတာ.. အေးအေးဆေးဆေးနေ။ အိမ်ရှင်တွေအရေးမင်းတို့နဲ့ မဆိုင်ဘူး)
(those people who are getting aids, do not understand how they should have done for Burma)
အပြောလေးကတော့ သိပ်ကို ကောင်းတယ်။ မင်းတို့ကောင်တွေက နအဖတော်လှန်တဲ့သူတွေ ထမင်းမစားပဲ တော်လှန်စေချင်ပုံရတယ်။ နအဖတော်လှန်တဲ့သူတွေရဲ့ ဘ၀ရပ်တည်ရေးကို လုံးဝ ထည့်မတွက်ပဲ အပြစ်တင်နေတာ လက်တွေ့မကျဘူး။ အခုဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဟာ… နအဖကို ပြုတ်ကျစေချင်ရင် မိမိဖာသာ အသေခံ.. မိမိဘ၀ကို စတေးပြီးလုပ်ကြ။ လူများစုကတော့ ဘေးကနေ လက်ပိုက်ကြည့်ပြီး မကြိုက်ရင် အတင်းအဖျင်းပြောမယ်တဲ့။ ရယ်ဖို့မကောင်းဘူးလားကွာ? ပြည်ပမှာရှိနေတဲ့လူတွေက စုပေါင်းပြီး နအဖ တော်လှန်နေတဲ့သူတွေကို ငွေကြေးလစဉ်ထောက်ပံ့နေတယ်။ အဲလိုထောက်ပံ့တဲ့ အကြားက မသမာမှုတွေ လုပ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ အပြစ်တင်ပါ။ ကိုယ်က ငွေကြေး တစ်ပြား တစ်ချပ်မှ မထောက်ပံ့လို့ သူတို့ဖာသာ ရှာကြံလုပ်ကြတာ ဘာစောက်ပစ်တင်နေလဲ? ဘာမှ တာဝန်မယူလိုတဲ့ မြန်မာတွေအတွက် . . အဲလို ချိုကြိုး နားရွက်ပဲ့တွေရတာတောင် ကံကောင်းလှပြီမှတ်ပါ။ ဒါတောင် မင်းတို့နဲ့ မတန်သေးဘူးနော်။
တိုင်းပြည်အရေး လက်တွေ့လုပ်နေသူများကို ကာကွယ်ပေးနေသည့်
ငါရေးထားတာ သေသေချာချာ ပြန်ပြန်ဖတ်ပြီး စဉ်းစားဆင်ခြင် ဘာလဲ DEMOCRACYဆိုတာ...
ကုလားနဲ့ဆီပုံး အကြောင်းပဲ စိတ်ထဲရောက်ရောက်မနေနဲ့။
I don't mean they don't need to eat food.
As long as they need to support their life, the people who live in Burma need to maintain their lives.
If they did not perform in the movie, how the government would have killed their carrier. You can also see the other actors supporting Ko Kyaw Thu.
WE NEED TO PROTEST THE BURMESE GOVERNMENT. IF THE PEOPLE WHO LOVE TO SACK THE GOVERNMENT, THEY SHOULD GO BACK TO BURMA AND DO THINGS WITH THE PEOPLE LIKE KO KO GYI AND THE OTHERS.
အေးကွာ။ လှည့်ပတ်ပြီး ဖာသည်မလို သိက္ခာမရှိ ပြောနည်းက ဒါပညာအကုန်လား? ဒီထက်ပိုပြီးမြင့်အောင် မပြောနိုင်ဘူးလား? ဒီမိုလုပ်စားတွေက တိုင်းပြည်ကို အကျိုးမပြုဘူး။ ငွေတွေကို လိမ်နေတယ်ဆိုပြီး မင်းက ဖင်ပိတ်ပြောခဲ့တယ်။ ငါက ပဲခူးကိစ္စကို ဥပမာပေးပြီး ဒီမိုလုပ်စားတွေ တိုင်းပြည်အကျိုးပြုပုံ ပြောခဲ့တယ်။ ငွေလိမ်တာလည်း မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ငွေ မဟုတ်လို့ ဘာမှ အပြစ်ပြောဖို့ မလိုဘူးလို့ ရှင်းပြထားတာပဲ။ အရူးသိုင်းကွက်နင်းပြီး ပေါကြောင်ကြောင်လုပ်နေပုံထောက်ရင် . . . ဒီမိုလုပ်စားတွေရဲ့ အလုပ်ဟာ ကုသိုလ်လည်းရ ၀မ်းလည်းဝ ဆိုတာကို … မင်းကိုယ်တိုင် လက်ခံလိုက်ပြီလို့ မှတ်ယူလိုက်ပြီ။ ၀ါးဟားဟား
(If they did not perform in the movie, how the government would have killed their carrier. You can also see the other actors supporting Ko Kyaw Thu.)
တရားမျှတမှုဆိုတဲ့ ပေတံကြီးကို ရိုက်ချိုးလိုက်စမ်းပါ။ ဒီအချိန်မှာ အဲဒါကြီးက အသုံးမ၀င်ဘူး။ ၀ိုင်းစုခိုင်သိမ်း တစ်ယောက်ကိုပဲ မတရားလုပ်လေခြင်းဆိုတဲ့ အသံလဲမထွက်နဲ့။ ဦးကျော်သူတွေ ဘာတွေနဲ့လဲ နှိုင်းမနေနဲ့။ ကျုပ်ပြောထားပြီးသား… ဒီကိစ္စကို တရားလို့ထောက်ခံတာ မဟုတ်ဘူး။ ထောက်ခံသင့်တယ်ထင်လို့ ထောက်ခံတာ။
ခင်ဗျားအပါအ၀င် ၉၉.၉၉% မြန်မာလူမျိုးတွေက ဘေးထိုင်ဘုပြောလုပ်ကြတယ်။ တိုင်းပြည်အရေးကို မိမိနဲ့ မဆိုင်သလို ဘေးကနေ လက်ပိုက်ကြည့်နေကြပါတယ်။ နအဖကို တကယ် ဆန့်ကျင်ရဲတာ ဒီမိုလုပ်စားတွေပဲရှိပါတယ်။ အခုအခြေအနေမှာ နအဖဆန့်ကျင်ရေးဟာ လုံးဝ အရေးနိမ့်တော့မယ့် အခြေအနေ ရောက်နေပြီ။ အဲဒါကို ခင်ဗျားတို့က ဘာမှမလုပ်ပဲ … ဘေးကနေ ရပ်ကြည့်ပြီး . . . .ဆရာကြီးလိုလို.. ပညာရှိလိုလို .. တရားသူကြီးလိုလိုနဲ့ . . .သြ၀ါဒပေးနေရင်. . . . နအဖတော်လှန်ရေးဟာ လုံးဝ ဇတ်သိမ်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ဗျာ.. ၀ိုင်းစုခိုင်သိမ်း ဘာဖြစ်ဖြစ် အလေးမထားပါနဲ့။ ဘေးထိုင်ဘုပြော မြန်မာ့အသိုင်းအ၀န်းအတွက် တရားမျှတမှုက အရေးမကြီးဘူး။
Ar သို. ...
(ထွီ.... ဒါနဲ့များ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက်ဒဲ့ကွာ မင်းတို့DEMOCRACYလုပ်စား သမားတွေ )
ဇော်မျိုးကို ဆဲခြင်တာနဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး လုပ်နေ သူတွေကို သိမ်းကြုံး မဆဲပါနဲ့ကွာ။ ဇော်မျိုး ဆိုတဲ့ ကောင်က နှစ်ဖက်ချွန် Double Agent (လေ ကုန်သည်)ပါ။ ဘယ်သူ.ဖြစ်ဖြစ် လိုက် ဆရာ လုပ်ခြင် နေတဲ့ စိတ္တဇဝေဒနာ ရ ထားသူပါ။
သူ.လူ ကိုယ့်ဖက်သား ဇော်မျိုးကြောင့် တော့ ဒီမိုကရေစီအရေး တကယ်လုပ်နေသူတွေ ကို အပစ်မတင်သင့်ပါ။
Every one is respected and no one is blamed expect SPDC. However SPDC slaves are not SPDC and cheating is not good for every single case.
လူသားအကျိုးပြုလုပ်ငန်းလုပ်ရင် မင်းတို့ကောင်တွေကို လုံးဝရှာမတွေ့ဘူး။ ပြောတော့ အစွန်းရောက်က အကြမ်းဖက်တာတဲ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာ.. ခရစ်ယာန်.. ဟိန္ဒူအစွန်းရောက်တွေက ဘာလို့ မလုပ်တာလဲ? ဗုဒ္ဓဘာသာမြေကို ခိုးတယ်။ ဟိန္ဒူမြေကိုခိုးတယ်။ ဂျူးမြေကို ခိုးတယ်။ ခရစ်ယာန်မြေကိုခိုးတယ်။ ရန်ကုန်ဆူးလေ ဘုရားမြေလည်း လုထားပြီး… အရှက်မရှိ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လုပ်ထားတာ လူတကာ အမြင်ပဲ။ အခုဆိုရင် အိန္ဒိယမှာ ဟိန္ဒူမြေကို ခိုးလို့ ပြဿာနာ အကြီးအကျယ်တက်နေတယ်။ တခြားဘာသာတွေရဲ့ မြေကို ခိုးတဲ့ကောင်တွေ လမ်းဘေးမှာ ခွေးလို ၀က်လို ဒုက္ခရောက်တာ မြင်ရဦးမယ်။ ဟဲဟဲ။
သူများအိမှာခိုကပ်ပြီး အိမ်ရှင်တွေကို ရန်တိုက်ပေးနေသူများကိုဆန့်ကျင်သည့်
ပြောထားတာလေးတွေထဲက အရေးကြီးတာလေးတွေပဲ ပြန်ကူးပြလိုက်တယ်။
☀ ထောက်ခံသင့်တယ်ထင်လို့ ထောက်ခံတာ။
☀ အခုအခြေအနေမှာ နအဖဆန့်ကျင်ရေးဟာ လုံးဝ အရေးနိမ့်တော့မယ့် အခြေအနေ ရောက်နေပြီ။
☀ ဘေးထိုင်ဘုပြော မြန်မာ့အသိုင်းအ၀န်းအတွက် တရားမျှတမှုက အရေးမကြီးဘူး။
ကျနော်ကတော့ kyawhtin ရဲ့ ပိုစ်.ကို ထောက်ခံပြီး မိမိယုံကြည်ရာ ကို အမှန်တရားဖက်မှ ထောက်ခံလိုသူ တိုင်းက ဆန္ဒပြသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာတကယ်တော့ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အရ ထိခိုက်အပုတ်ချခြင်းတော့ မလုပ် သင့်ပါ။
ခုလို သမိုင်အမှားတွေနဲ့ စစ်အစိုးရ ရဲ့ ”မဟုတ်တန်းတရား ၀ါဒဖြန့်တာကို လက်မခံဘူး ဆိုတဲ့ အချက်ကို ပြသတာ ” ဘဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ် - လူကို မရည်ညွှန်းတဲ့အတွက် မည်သူ.ကို ဆန္ဒပြရမှာလဲ မေးရင်တော့ ”ပူးပေါင်း ပါဝင်သူ မည်သူ.ကိုမဆို ပြသင့်တယ်” လို.ဘဲ ဖြေပါရစေ ။
"ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာ ရိုးသားရတယ် နိုင်ငံရေးကို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ကျိုးအတွက် အသုံးမချရဘူး" ဒီစာတကြောင်းကိုပဲ သေသေခြာခြာ အခေါက်ခေါက် ဖတ်ပြီးနားလည်အောင်လုပ်
နွားမကျ ခွေးမကျ တွေးတွေးပြီး သုတ်ကြောင်ကြောင် ပြောမနေနဲ့။
မင်းပထွေး နအဖက စွန့်ပြစ်လိုက်လို့ ဒီမိုလုပ်စားသူတွေနဲ့ပေါင်းပြီး ဟိုလူ အဖေခေါ် ဒီလူအဖေခေါ်နဲ့ ခွက်ပြတောင်းစားရိုက်စား နေတာ နားလည်တယ်။ ဒါပေမဲ့ မင်းအမေလဲ သနားအုံး။
သူ.လူ ကိုယ့်ဖက်သား ဇော်မျိုးကြောင့် တော့ ဒီမိုကရေစီအရေး တကယ်လုပ်နေသူတွေ ကို အပစ်မတင်သင့်ပါ။"
တကယ် အနှစ်နာခံ ကိုယ်ကျိုးစွင့်ပြီး လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ရှိကြတာ သိပါတယ် လေးလဲ လေးစားပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြောနေတာက နအဖနွားနဲ့ ထူးမခြားနားတဲ့ ဒီမိုလုပ်စားခွေးသူတောင်းစားတွေကိုပါပဲ။
မင်းက “ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာ ရိုးသားရတယ် နိုင်ငံရေးကို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ကျိုးအတွက် အသုံးမချရဘူး" စကားလေးတစ်ခွန်းကို အလေးထားတယ်ပေါ့? ဟဲဟဲ။ အဖြူက ကြည်ကြည်ဖြူဖြူနဲ့ပေးတာတောင် .. အဖြူပထွေးတွေအတွက် နာနေတယ်ဆိုပဲ။ ဒီမိုလုပ်စားတွေ မရှိတော့ဘူးဆိုရင် နအဖ လူအခွင့်အရေးကို ပိုပြီးချိုးဖေါက်လာမှာတွေ… နအဖ လုပ်ချင်တိုင်း အထိမ်းအကွတ်မရှိ လုပ်လာမှာတွေကို မစိုးရိမ်ဘူးပေါ့နော်?
(p.s. မင်းအဖေ ကုလားတွေအတွက် နာမနေနဲ။ ကုလားတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘုရားမြေတွေကို ခိုးထားတာ ဆူးလေမြေတစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘူး.. နယ်တွေမှာလဲရှိတယ်။ မင်းအဖေကုလားတွေက သာသနာဖျက်တွေ သူခိုးတွေကွ)
မင်း ပါးစပ်၊ ဦးဏောက် နဲ့ အဆင့်အတန်း ကတော့ကြည့်ရတာ တကဲ့ ဖာအကြီးစားစိတ်ပဲ... ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောပြောနေတဲ့။ အလကားရရင်ယူမယ် ကိုယ်ကျိုးအတွက်သုံးမယ် ဟုတ်လား။ ဟားဟားဟား
သေချာနားထောင်ဟေ့ကောင် နအဖ လူအခွင့်အရေးကို မချိုးဖေါက်အောင် မင်းပထွေးဒီမိုလုပ်စားတွေပဲ လုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ အဖြူတွေပေးတဲ့ ပိုက်ဆံကလည်း မင်းကို မွေးစားသားမလို့ ကိုယ်ကျိုး အတွက်ပေးသုံးနေတာ မဟုတ်ဘူး။ ပေးထားတဲ့ အခွင့်အရေး နဲ့ အကူအညီတွေက တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုး အတွက် အထဲမှာ တကယ် အနှစ်နာခံ ကိုယ်ကျိုးစွင့်ပြီး လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး သမားတွေ နဲ့ ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးရှိရှိ အသုံးပြုဖို့ကွ။ မင်းတို့.
နအဖနွားနဲ့ ထူးမခြားနားတဲ့ ဒီမိုလုပ်စားခွေးသူတောင်းစားတွေ အတွက်မဟုတ်ဘူး။
ဒီလောက်ပြောတောင် မင်းသဘောမပေါက်လဲ.. အေးလေ မင်းဉဏ်အဆင့်အတန်းနဲ့ မင်းဒီမိုလုပ်စားတွေကို ဒုတ်ဆွဲနေရတဲ့အခြေအနေနဲ့... ငါနားလည်ပေးပါ့မယ် ညီလေးဇော်လဗွတ်မျိုး။
(ကုလားတွေနဲ့မင်းကြားက မင်းအမေအတွက် နာနေတဲ့ ရန်ညိုးကိုလဲ..ငါနားလည်ပေးပါ့မယ်)
“သေချာနားထောင်ဟေ့ကောင် နအဖ လူအခွင့်အရေးကို မချိုးဖေါက်အောင် မင်းပထွေးဒီမိုလုပ်စားတွေပဲ လုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူး” ဟင်.. ဟုတ်လား? နအဖက လေးစားပြီး ကြောက်လန့်နေတဲ့ထဲမှာ . . ကိုယ်ကျိုးစွင့်ပြီး လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး သမားတွေရှိလို့လား? အဲလောက်စွမ်းနေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားကောင်းဆိုတဲ့ သူတွေကို နာမည်နဲ့ ပြောပြစမ်းပါ။ ငါသိသလောက် ဒီမိုလုပ်စားမဟုတ်ရင် နအဖက ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ဒီမိုလုပ်စားထဲမှာတောင် မိုးသီးစီးထားတဲ့ ဖိနပ်ကို အကြောက်ဆုံးဆိုပဲ… ဟိဟိ
p.s. ဟေ့ကောင်။ ကုလားက သာသနာဖျက်တယ်လို့ရေးထားတာ ကိုမဖတတ်ဘူးလား? ကုလားဖင်ကို ရက်ပေးနေလို့ ငါ့စာကို ကောင်းကောင်း မဖတ်နိုင်ပဲ ပေါက်ကရတွေ ပြောနေတာလား?
မင်းဒီလောက်တောင် ဉဏ်တိမ်ရလား မင်းပထွေးဒီမိုလုပ်စားတွေကိုပဲ အဖေရင်းထင်ပြီး ကိုယ်ကျိုးစွင့်ပြီး လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး သမားတွေရှိလို့လားမေးနေတာ။ မင်းပထွေး ဒီမိုလုပ်စားခွေးသူတောင်းစားတွေ ဘယ်သူ့နာမည်တွေ ဘဲန်းပြပြပြီး လုပ်စားနေတယ်ဆိုတာ ပြန်မေးကြည့်.။
အေး.. မိုးသီးဒုတ်ဆွဲပြီး လူအထင်ကြီးအောင် ကျိုးစားပန်းစား သုတ်ကြောင်ကြောင်ပြီး ကုန်းကုန်းအော်မနေနဲ့။ ကုလားတွေနဲ့လည်း စိတ်နာတာထား.. မင်းအမေကို သေချာမေး သူတို့နဲ့မင်းအမေကြား ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲ ဆိုတာ.. တော်ကြာ မင်းအဖေခေါ်စရာ တိုးလာမယ် ဟိုးဟိုးဟိုး
ဟ.. မေးတာလဲမဖြေပါလား။ ဒီမိုလုပ်စားတွေ မရှိရင် နအဖ လူအခွင့်ရေးကို ပိုပြီးချိုးဖေါက်လာလိမ့်မယ်လို့ ငါကပြောတာကို မင်းက .. လက်မခံဘူးတဲ့။ အဲဒါဆိုရင် ဒီမိုလုပ်စားတွေလို အစွမ်းထက်တဲ့သူ ဘယ်သူရှိလဲဆိုတာ.. ပြောပြမှပေါ့။ မင်းဟာက ဆဲတာပဲရှိတယ်။ အဓိကဆွေးနွေးတာကို မသိဟန်ဆောင်နေတယ်။ ဘာလဲ? ဦးမိုးသီးရဲ့ဖိနပ်အသံကြားလို့ ကြောက်ဖျား..ဖျားသွားသလား?
☀ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘန်းပြလုပ်စားသည်ဖြစ်စေ ဒီမိုလုပ်စားတွေမရှိရင်.. အဓိကလိုအပ်ချက် နအဖကို နိုင်ဖို့ပဲ မဟုတ်လား?
☀ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီမိုလုပ်စားတွေလို အစွမ်းအစရှိပြီး နအဖကို နှိပ်ကွပ်နိုင်တဲ့သူ ဘယ်သူရှိလဲဆိုတာ.. ပြောပြပါ။
☀ ဒီမိုလုပ်စားတွေသာ မရှိရင် မြန်မာလူထုဟာ ကျီးလန့်ဆန်စားဖြစ်နေမယ်ဆိုတာ လက်ခံပါ။ ငြင်းလိုက သူတို့လို့ အစွမ်းရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် (၀ါ) အဖွဲ့အစည်း နာမည်ကို ပြောပြပါ။
☀ မပြောပြနိုင်ရင်.. မြန်မာပြည်ကြီးကို အကျိုးပြုနေတဲ့ ဒီမိုလုပ်စားတွေကို လူသိရှင်ကြားတောင်းပန်ပေးပါ။
ဟေ့ကောင် ဟိုလူအဖေခေါ် ဒီလူအဖေခေါ် ဇော်လဗွတ်မျိုး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးတင်ဦး၊ ဦးဝင်းတင်၊ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး နဲ့ တခြား တကယ်အနှစ်နာခံပြီး နာမည်နဲ့ကိုယ်ကျိုးအတွက် မဟုတ်ပဲ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် လုပ်နေကြတဲ့ သူတွေအများကြီး။
ဒီလူတွေ အားလုံးဒီမိုလုပ်စားတွေထက် တန်ဖိုးရှိတယ် အစွမ်းအစရှိတယ်။ မင်းပထွေး ဒီမိုလုပ်စားခွေးသူတောင်းစားတွေ လုပ်တာက ဒီလူတွေအနှစ်နာခံလုပ်နေတာကို ဘဲန်းပြ ပိုက်ဆံတောင်း ကိုယ်ကျိုးရှာဖို့ပဲ။
မင်းလည်း မိုးသီးဒုတ်ဆွဲပြီး ပါးစပ်က ဖာသည်မလို ပြောချင်တာ ပြောမနေနဲ့။ ငါရေးထားတာ သေချာပြန်ပြန်ဖတ်စမ်း
ဟေ့ကောင်စောက်ပေါ Ar။ ငါ့စကားနွားရ လျှောက်မပြောနဲ့။ လက်တွေ့ကျကျပြောစမ်းပါ။ မင်းပြောတဲ့သူတွေက ဒီမိုလုပ်စားတွေလို လူအခွင့်အရေး အတွက် အားကိုးရတာမှ မဟုတ်တာ။ အခြေအနေအရပဲပြောပြော… ပိုက်ဆံရလို့ လုပ်တယ်ပဲပြောပြော.. ဒီမိုလုပ်စားတွေ ဖြဲခြောက်လိုက်တာ ဗိုလ်ချုပ်တွေ လန့်ဖျား.. ဖျားပြီး ပဲခူးကိစ္စ ဖြေရှင်းပေးတယ်။ တပ်တွင်း စည်းကမ်းတင်းကျပ်တာတွေ လုပ်လာတယ် မဟုတ်လား? တကယ်လို့ ဒီမိုလုပ်စားတွေသာ မရှိရင် သူတို့လို ဘယ်သူမှ မလုပ်နိုင်ပါဘူးကွာ။ တိုင်းပြည်ငွေလဲ ကုန်တာမဟုတ်ဘူး။ မြန်မာပြည်လူအခွင့်အရေးအတွက် ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ဒီမိုလုပ်စားတွေကို ဘာကြောင့်မုန်းနေတာလဲ?
p.s. မိုးသီးဖိနပ်ပေါက်ချက်ကတော့ သေနတ်ကျည်ထက် ပိုပြီး ထိရောက်တာ လက်တွေ့ပဲ.. ဟိဟိ။
The following is copied from moemakablog. This isavery good comment.
Everyone should review it.
Lu mann said...
You guys are keep talking about Kyaw Thu and Zar Ga Nar and compare them with the celebrities who were acting in “Ar Yone Oo” movie. I totallyagreet that Kyaw Thu and Zar Ga Nar are heroes and really fighting for our Burmese people. If you compare them with the celebrities acting in “ Ar Yone Oo” movie will be like “ oil an water”.
But what if we compare you guys with Min Ko Naing , Ko Ko Gyi , other student leaders and politicians who live inside Burma and fighting for our Burmese people.
What are you guys doing when these student leaders were fighting for our Burmese people in 2007????
What are you guys doing when our monks fighting for our Burmese people?????
Are anyone of you guys thinking of going back to Burma and support them and join them at that time???
Are anyone of you guys thinking of even going to border area doing political movement and support them from there????
You guys gave so many reasons to stay here (not only you, but also brought families here) and just issue statements and just shout while no one arrest you here.
If we compare you guys with Min Ko Naing and others who live inside Burma and really fighting for Burmese people, you guys are no different than the celebrities who acted in “ Ar Yone Oo” movie.
I am not blaming you for this. I can understand that you guys are afraid of arrested by military government and cannot go back to Burma because of this. Some more I support your political movements here and fighting against military government from here in anyway. But no matter what you guys cannot and dare not go back Burma. The same apply to the celebrities who acted in “Ar Yone Oo” movie.
I am not protecting them and get nothing from them. But I just want you guys to keep some considerations for those celebrities for where they live and who they dealing with. You all knew what happened to Nyi Gyaw and other three celebrities who helped Kyaw Thu. We all can see from that event, how difficult for celebrities to live under this military government.
If you guys want to protest the celebtities who act in government’s policu movies, even Kyaw Thu was act in “ Hla Lay Sein” movie. Daw Mar Mar Aye, May Sweet, Mi Mi Win Phay, Ya Da Nar Oo, Ni Ni Win Shwe, Cho Pyone,……. Almost everybody who live here were sung and acted in government’s policy movies. Why now???? Why only now???????
Please review the following comment written by Lu mann.
You guys trying to compare lives of prisoners with the life of celebrity here when protest.
Everybody here knew all those political prisoners how they sacrificed and separated from their families and their love ones. Everybody felt sorry for them.
But it is totally different issue that comparing those prisoners lives and the celebrity life.
You guys are keep on telling that all these protests are not intended for personal attack. If this is not personal attack why are you guys holding some posters that mentioned personal and why are you guys want to cancel all these concerts. Not only here, but also in other countries. Why are you guys want all these celebrities to get bar from getting Visa to other countries??? You guys also try to stop the celebration party for celebrities in Las Vegas. If you are not attacking personally, all these things shouldn’t be happened.
No one blame you and argued with you guys if you guys are protesting against military government, “Ar Yone Oo” movie and their policy. I support non personal protest. Everybody would have support you. But your guys are attacking celebrities and the worse thing is you guys are attacking audience who are watching these music concerts.
The innocent people went there and watch just concert. They were not there to watch “ Ar Yone Oo” movie. They were not there to support the military government. And also Wine Su Khine Thein was not there to sing policy songs.
But you guys name all the audience Than Shwe’s Friends. And also criticized the audience like “ myat na pyaung tite”. This is totally unacceptable.
I have asked some the protesters from previous protest that why are you guys doing this.
You know what; they are telling me that they are doing this because other politicians in other states and other countries were doing this. If they don’t do this protest, they will get blame by other politicians. I want you to check within your group that if they really want to do this or not.
And I don’t understand why you guys are trying so hard to do this protest about this music concert.
There is third Anniversary of Saffron Revaluation within this month and I never heard of you guys are planning for this protest.
Shouldn’t we concentrate more on this Saffron Revaluation????
I think you guys are doing this protest based on your emotion for the prisoners inside Burma and heading toawrong direction at this time.
I want you to succeed and everybody want you guys to succeed.
Let me make myself clear about this comment again,
I support non personal protest and I support protest against “ Ar Yone Oo “ movie 100%.
(လောကကြီးမှာ ထူးခြားအံ့ဖွယ်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ Brian လဲပါတယ်။ ခင်ဗျားက နအဖကို မုန်းတယ်ပြောတယ်။ နအဖ ဘက်ကလူရှုံးသွားတော့… အခဲမကျေဖြစ်နေပါလား။ဟဲဟဲ။ ဒီမိုတွေလုပ်ရပ် မှန်တယ်ပြောတာကို မကျေနပ်ဘူးပေါ့နော်? ဘာကြောင့်လဲ?)
အဲဒီကော်မန့်က အမြင်ကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ ရေးထားတယ်။ သူငယ်တန်းကလေးက ရေးထားတဲ့ ကော်မန့်ပဲဖြစ်ရမယ်။ ဒီမိုလုပ်စားတွေနဲ့ မင်းသမီးတွေ ကိစ္စပဲ ထည့်တွက်ထားတွက်ထားတယ်.. အဓိကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်ကို လုံးဝထည့်မတွက်ဘူး။ ခင်ဗျားက စကားကို နိုင်အောင် ပြောနေတော့… အဓိကအချက်တွေပဲ ပြန်ရေးပြလိုက်မယ်။ နောက်လာလဲ အခုဟာတွေပဲ ရေးပြလိုက်မယ်။
☀ တရားတာ မတရားတာက အရေးမကြီးဘူး။ နအဖဆန့်ကျင်ရေးကို လုံးဝ ရပ်တန့်မသွားအောင် လုပ်တဲ့အတွက် ဒီလုပ်ရပ်ကို ထောက်ခံရမယ်။
☀ ဒီလုပ်ရပ်ကြောင့် ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း ဘ၀ပျက်သွားတာ မဟုတ်ဘူး။ သူရဲ့ အသက်အန္တာရယ်ကို ခြိမ်းခြောက်တာ မဟုတ်ဘူး။ သူနိုင်ငံခြားမထွက်ရလို့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။ ဘာအတွက် ခင်ဗျားတို့က အဖြစ်သည်းနေကြတာလဲ?
☀ အခုလို နအဖတော်လှန်ရေး ပျက်လုနီးနီးဖြစ်နေချိန်မှာ ဒီလုပ်ရပ်ဟာ အရမ်းကို မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်။
☀ ဒီမိုလုပ်စားတွေရဲ့ အကျင့် စာရိတ္တတွေကို ထည့်မပြောပါနဲ့။ သူတို့လုပ်ရပ်ဟာ တိုင်းပြည်ကို အကျိုးပြုလားဆိုတာပဲ ကြည့်ပါ။ သူတို့လုပ်ရပ်က တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် ဆန့်ကျင်တဲ့သူဟာ အရူးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဟိုလူအဖေခေါ် ဒီလူအဖေခေါ် ဇော်လဗွတ်မျိုး
မင်းကို ဘယ်လိုပဲ ပြောပြပြောပြ မင်းပထွေး ဒီမိုလုပ်စားတွေကိုပဲ အဖေရင်းထင်ပြီး ခြေသလုံးဖက် ကပ်ဖားရက်ဖား မဟုတ်ကဟုတ်က ရှာကြံပြောပြီး အထင်ကြီးနေကွာ။ မင်းအမေတော့ ဒုက္ခပဲ။
အေး... ဟားဟားဟား မင်းပြောတဲ့ အခြေအနေအရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပိုက်ဆံရလို့လုပ်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာ ဖာသည်မတွေပဲပြောတဲ့ စကားကွ။ အေးလေ
ငါပြောသားပဲ ဒီမိုလုပ်စားခွေးသူတောင်းစားတွေက နအဖနဲ့အတူတူပဲ ဖာသည်မလောက်တောင် စောက်ဆင့်မရှိတာ။ ဒါကြောင့်လဲ မင်းလေးစားပြီး အဖေ အဖေလို့တကြော်ကြော်ခေါ်နေတာ။
မင်းဟိုလူဒုတ်ဆွဲ ဒီလူဒုတ်ဆွဲပြီး လူအထင်ကြီးအောင် ကျိုးစားပန်းစား သုတ်ကြောင်ကြောင်ပြီး ကုန်းကုန်းအော်မနေနဲ့။ ငါရေးထားတာတွေ အစကနေ သေသေချာချာ အခေါက်ခေါက်ပြန်ပြန်ဖတ် နေ့တိုင်းဖတ် (မင်းစွဲနေတဲ့ ကုလားတွေ အကြောင်းလဲ မစဉ်းစားတော့ဘူးပေါ့ကွာ...ဟဲဟဲဟဲ) မင်းကို ဉဏ်မတိမ်အောင် ငါခဏခဏ ရှင်းမပြနိုင်ဘူး။ မင်းပထွေးမဟုတ်ဘူးကွ မအားဘူး။
PS: မိုးသီးဖိနပ်က မင်းအတွက်အဲဒီလောက်အထင်ကြီးဖို့ကောင်းရင်လဲ ကိုက်ထား ညီလေးဇော်လဗွတ်မျိုး... မင်းကဒီမိုလုပ်စားခွေးသူတောင်းစားတွေရဲ့ နောက်လိုက်ခွေး BOTTOM B*TCH ဆိုတော့။
☀ ဘာအချက်အလက်မှ မပါပဲ ဆဲဆိုနေတာ အဓိပါယ်မရှိပါ။
☀ ဒီမိုလုပ်စားတွေဟာ မြန်မာပြည်တွင်း လူအခွင့်အရေး အတွက် လက်တွေ့ကျကျ လုပ်နိုင်သူတွေသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားလက်ခံလိုက်ပြီလို့ သဘောပေါက်ပါတယ်။
☀ ဒီမိုလုပ်စားတွေဟာ တိုင်းပြည်ငွေကို မသုံးပဲ သူတို့၏ အစွမ်းအစနဲ့ ငွေရှာပြီး လုပ်နေသူမိုလို့ အရည်အချင်းရှိသူတွေဆိုတာ ခင်ဗျားလက်ခံလိုက်ပြီလို့ သဘောပေါက်ပါတယ်။
☀ နအဖ ရွေးကောက်ပွဲအတုလုပ်တဲ့ အချိန်မှာ မြန်မာလူမျိုးတိုင်း ဒီမိုလုပ်စားတွေနဲ့ လက်တွဲပြီး နအဖကို ဆန့်ကျင်ရပါမည်။
☀ မိုးသီးဟာ သူ့ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်တဲ့ဖိနပ်နဲ့ နအဖကို ပြစ်ပေါက်ခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိငွေကြေးသုံး၍ တိုင်းပြည် အကျိုးလုပ်ဆောင်သူ ဖြစ်သောကြောင့် ဂုဏ်ပြုခြင်းခံရမည့်သူသာဖြစ်ပါသည်။
p.s. ကျုပ်မိဘ ၂ ပါးစလုံးက အညာသား စစ်စစ်တွေပါ။ ရေလုံးဝ မရောပါဘူး။ ကျုပ်လဲ အညာသားပါပဲ။ ကျုပ်ဟာ မြန်မာစာကို ကောင်းကောင်းဖတ်နိုင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုပြောဆိုဖို့ မလိုပါဘူး။
We do not like the movie. We understand why you acted in it.
So you are invited to attend the dinner party at the most expensive restaurant in San Francisco on Sunday 09/26/2010.
We will see your concert and will support you but not SPDC.
ခက်တယ်။ ခင်ဗျားတို့တွေ ၀ိုင်းစုခိုင်သိမ်းကို စားသောက်ဆိုင် ဖိတ်တ်တယ်ဆိုရင် သူ့ဆီ ဖုန်းဆက်ပြီး ဖိတ်လိုက်ပါ။ ဒီမှာလာဖိတ်လို့ ဖြစ်ပါ့မလား? ဦးပေါဘလော့မှာ ဖိတ်စာ လာရေးလို့ သူသိမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဟဲဟဲ.. ဒီဘလော့လာဖတ်တဲ့သူတွေကိုပါ သူနဲ့အတူတူစားဖို့ ဖိတ်တာလား? တော်ပါပြီဗျာ။ အဲဒီနေ့ အပြင်မှာ ရည်းစားနဲ့ချိန်ထားတယ်။
Hello Ko Myo Chit Myanmar,
You are invited as we are looked like brothers.
If you want, you can join with us and you can educate them like how they can void that kind of movie next time, and how they can do something for democracy if they have to.
ဟိုလူ့ဖိတ်.. ဒီလူ့ဖိတ်နဲ့ လူမှုရေးတွေ သိပ်ကိုကောင်းနေတယ်။ ကဲပါ။ တခြားလူတွေ လာတာ မလာတာ အရေးမကြီးဘူး။ ၀ိုင်းစုခိုင်သိမ်းကို .. သူ့ကိုဖိတ်ထားတဲ့ဖိတ်စာကို … ဖုံးဆက်ပြီး ဦးပေါ ဘလော့မှာ လာဖတ်ဖို့ပြောလိုက်ဦး။ တော်ကြာ.. အဓိကလူ ၀ိုင်းစုခိုင်သိမ်းက မလာပဲ. . ဘေးက အချောင်စားတွေပဲလာနေလို့… စိတ်လေသွားမယ်။ ဟဲဟဲ။
Is Myo Chit Myanmar your brother in law?
No, he is not but may be as he likes my sister.
My sister is older than 18 and whomever she is into will be my brother-in-law, so are you.
Dear Ko Myo Chit,
I will getahold of her and let me know if you can come over.
Myo chit will like you instead of your sister...
☀ မိမိကသာ အဏာသိမ်းပြီး.. မိမိ အဏာကိုလုမှာ ကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ … ရဲဘော်ရဲဘက်အချင်းချင်း နောက်ကြောမှ ဓါးနဲ့ထိုးရဲသူ… ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး ဦးသန်းရွှေ သက်တော် ရာကျော်ရှည်ပါစေ။
ဖာသည်မလို ပါးစပ်ကဟိုဆွဲပြော ဒီဆွဲပြော လုပ်မနေနဲ့။ လာမညှိနဲ့ ငါနအဖရဲလည်းမဟုတ်ဘူး။ မင်းပြောတာ ဘာမှလက်ခံမနေဘူး။ မင်းပထွေး ဒီမိုလုပ်စားခွေးသူတောင်းစားတွေအတွက် စောက်ရူးလိုလို စောက်ခြောက်လိုလို ထင်တာမြင်တာ ကုန်းကုန်းအော်နေတာ။ ထပ်ပြောမယ် ငါရေးထားတာတွေ မနက်တစ်ခေါက် ညတစ်ခေါက် အစကနေ အခေါက်ခေါက်ပြန်ပြန်ဖတ်စမ်းပါကွာ... ပြန်ပြန်မဟောင်ခင်။
မင်း ကုလားတွေ ဆိပ်ဗိုလ်တွေ နဲ့ ဖင်ပိတ် ဆီပုံးပျောက် အညာသွားသွားနေတာသိတယ်... ထုတ်ထုတ်မပြောနဲ့ လူသိတယ် ညီလေးဇော်လဗွတ်မျိုး။
ဇော်လဗွတ်မျိုးဆိုတဲ့ကောင်က နအဖနွားနဲ့ဒီမိုလုပ်စားခွေးသူတောင်းစားတွေ စပ်ကြတဲ့ကောင်။
အလကားရရင် အိမ်သာထဲက ရေတောင် နှစ်ခွက်သောက်ပြီး အဖေခေါ်တတ်တဲ့ကောင် တော်တော်လိမ်မာတာ... ဟားဟားဟား
so you wont regret inviting him lol
"သမီးဖြစ်သူ မမာမာဦးကတော့ တိုင်းပြည်အတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့် ဗန်းမော်ထောင်မှာ မတရားဖမ်းဆီး အကျဉ်းကျခံနေရပြီး ဖခင်ဖြစ်သူကတော့ ကြည့်ရှု မယ့်သူမရှိ.. ဘာမရှိနဲ့ ဘဝရဲ့နေဝင်ချိန်ကို တစ်ဦးတည်း ဖြတ်သန်းရင်း သမီးဖြစ်သူကို တွေ့ခွင့်မရ သမီးပြန်လွတ်လာချိန်ကို စောင့်ရင်း ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်အတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံသူတွေရဲ့ မိသားစုတွေရဲ့ ဘဝအခြေတွေကို ကိုယ်ချင်းစာကြည့် ကြပါဗျာ.. ပြည်ပမှာ ရောက်နေတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်က တတ်အားသရွေ့ ပြည်တွင်းက အသက်စွန့်ခံ၊ ထောင်ကျခံ လုပ်ဆောင်ပေးနေသူတွေကို ကူညီထောက်ပံ့ ပေးသင့်ပါတယ်။ ဘာမလုပ်ဘူးလား ညာမလုပ်ဘူးလား ဆိုတာထက် ကိုယ်ဘာလုပ်ပေးနိုင်တယ် ဆိုတာကို အရင် စဉ်းစားပေးကြပါလို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက် ရပါတယ်။"
Unbelievable! Why there are many people who are confusing such clear case. Let's imagineacelebrity life. They must be ready to do ANYTHING for survival until they reach the level of having full confidence. I don't know exactly, but I can tell that most of them did even approach by themselve to get involved in that video. It is simple, all smart people will do that if they don't have special belief or faith or any other reason to value morality.
Impact of the video: very high risk. People used to trust blindly whatever their beloved celebrity say.